Fivoriana niarahana tamin’ny FONDATION FRIEDRICH EBERT STIFTUNG (FES) tao amin’ny Hôtel GRAND MELIS Tsaralalana – Sénat de Madagascar
Fivoriana niarahana tamin’ny FONDATION FRIEDRICH EBERT STIFTUNG (FES) tao amin’ny Hôtel GRAND MELIS Tsaralalana
Notanterahina ny zoma 25 janoary 2019, tao amin’ny hotel Grand Melis, ny fivoriana nokarakarain’ny Fondation Friedrich Ebert Stiftung niarahana tamin’Andriamatoa John MIANDRARIVO (Chargé du projet de Coopération Parlementaire FES) sy Ramatoa Rina RANAIVOHARISON (Responsible de la logistique/ assistant du projet de Coopération parlementaire FES) ary nadraisan’ ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny Antenimierandoholona sy ny Antenimierampirenena anjara.
Nandritra ity fivoriana ity no nanaovan’ny tompon’andraikitra avy ao amin’ny FES tatitra mikasika ny asa vita hatramin’izay nisian’ny tetikasa niarahan’izy ireo tamin’ny parlemanata roa tonta dia ny taona 2017 sy ny taona 2018 izany. Ankoatr’izany dia nisy koa ny famolavolana tetikasa hotanterahina amin’ity taona 2019 ity.
Voalaza ao anatin’ny tatitra fa tratra ny tanjona nandritra ny taona 2017 sy ny taona 2018 satria nihoatra lavitra noho ny noeritreretina ny habetsahan’ ireo olona nandray anjara tamin’ny tetikasa ary niakatra ho 105,45% ny tahan’ny fahatontosan’ny tetikasa, tsikaritra kosa anefa tamin’izany ny fahavitsian’ireo parlementera nandray anjara . Ireto avy ireo karazana tetikasa izay nokarakaraina tamin’izany “auditions publiques, ateliers thématiques, forums de rencontre et les forums Socio-économiques”.
Mba ho fanentanana bebe kokoa ireo parlemantera handray anjara amin’ireo tetikasa iarahana amin’ny Fondation Friedrich Ebert Stiftung dia niara-nikaon-doha sy niady hevitra ireo tompon’andraikitra isakin’ny Andrimpanjakana nitady hevitra hanatsarana kokoa an’izany. Marikina fa amin’ity taona 2019 ity, ho fanohizana an’ireo tetikasa efa natao hatramin’izay dia hisy ny karazana fanofanana : hoan’ ireo « assistans parlementaires », ireo mpiasa ao amin’ny fitantanan-draharahan’ny fitsinjaram-pahefana, ireo mpiasa ao amin’ny fitantanan-draharaha momba ny lalàna, ireo mpiasa ambony ao amin’ny Andrimpanjakana roa tonta sy ireo mpiasa ao amin’ny kabinetra misy ao ary ireo mpiasa ao amin’ny harifenitra.
Nofaranana tamin’ny fandaminana ny fandaharam-potoana hanatanterahana ireo tetikasa ireo ny fivoriana tamin’io andro io.